Phinda uphile iAlbham yeBeatles '1' Ngomsindo weSpatial kuMculo weApple | Iindaba ze-iPhone
Phinda uphile kwakhona iAlbham yeBeatles '1' Enomsindo weSpatial kuMculo weApple
Iaudio yeSpatial yaziswa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwiApple Music kwaye ukusukela ngoko akayekanga ukufumana udumo phakathi kwababhalisi bakho. Oku kungqinwe ngusekela mongameli wenkonzo yeSilver Schusser kolunye lodliwanondlebe lwakhe lokugqibela. Ngapha koko, kwiinyanga zamva nje sibona indlela ii-albhamu ezaziwa kakhulu nezidumileyo eziphinda zifundwe ngayo ukuze zinike la mava esandi. Uhlaziyo lwamva nje luvela UGiles Martin, umvelisi womculo owaziwayo, ngubani oye wakhumbula Icwecwe loku-1 leeBeatles ezaziwa kakhulu ngoku ekhoyo ukuba imamele kwi-Apple Music.
I-Spatial Audio Iza kwi-Beatles' '1' Album kuMculo we-Apple
1 Lelinye lawona cwecwe lidumileyo nguThe Beatles. Enyanisweni, yayiyeyona albhamu ithengiswa kakhulu kwi-2000-2009 yeshumi kunye nenye yeerekhodi ze-diamond ezintandathu ze-Beatles. Yingqokelela ye I-27 yeengoma zeBeatles ezaziyinombolo enye kwiitshathi ezilungileyo kakhulu e-US nase-UK. Umvelisi wecwecwe yayinguGeorge Martin, uyise kaGiles Martin, umvelisi obephethe uxanduva lokuyibuyisela kwi-Apple Music.
UGiles Martin ngumvelisi womculo okhe wancoma itekhnoloji yeaudio yendawo kunye neDolby Atmos. Ukongeza, waye waqinisekisa iinjongo zokukhumbula kwakhona icwecwe '.Sgt. Ibhendi yeqela lePepper eLonely Hearts' yiBeatles. Nangona kunjalo, 1 Yayiyicwecwe lokuqala elikhethwe nguMartin ukuba aqalise ukutsiba kulo mculo weBeatles ukuya kwiaudio yendawo yeApple Music.
Singonwaba kakade eli cwecwe likwisandi sendawo. Ukongeza, inkcazo yecwecwe kwiApple Music sele isazisa ngotshintsho:
I-Beatles '1 yakhululwa okokuqala ngo-2000 kwaye ngokukhawuleza yaba yi-albhamu ethengiswa kakhulu kwixesha lonke. Ibandakanya i-27 yeengoma ezinkulu zebhendi, zonke ezifikelele kwiNombolo ye-1 kwi-US okanye iitshathi zase-UK, olu hlelo luhlaziyiweyo ngoku lunemixube emitsha nguGiles Martin, kwiSpatial Audio kunye neDolby Atmos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Phinda uphile kwakhona iAlbham yeBeatles '1' Enomsindo weSpatial kuMculo weApple
Jonga ukusebenza. I-Apple iqinisekisa umsitho we-8 kaMatshi.
ICarPuride: yongeza iCarPlay kwimoto yakho ngemizuzu nje emibini (kwanangenazingcingo)